Shiinaha acrylic dahaarka maro Maro adag soosaarka iyo Warshad | Jiashun
Mashiinka fiber galaas dahaarka leh looxa ayaa leh iska caabin cimilo fiican, heerkulka sare iyo shucaaca ultraviolet. Waxay kaloo leedahay sameysmo filim wanaagsan iyo isugeyn, waana mid aan sun lahayn, ur lahayn oo bey'adda u fiican. Dharka muraayadda muraayadda ah ee loo yaqaan 'Acrylic' ee loo yaqaan 'fiber acated' ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay wax ku gooyaan, ku tolaan oo ay si fiican u daloolaan
Daweynta-looxid-qufulka (Acrylic coated) ayaa xoogaa adkeeya dharka si loo yareeyo qadarka fiiqista inta lagu guda jiro sameynta. Mashiinka-muraayada-dhammaadka ah ee loo yaqaan 'fiber -lass' ayaa u saamaxaya isticmaalaha inuu gooyo, tolo oo feerto godadka si wax ku ool ah.
Albaabada dabka / Daaha dabka
Nidaamyada kale ee xakamaynta dabka
1. S: Ka waran khidmadda saamiga?
J: Muunad dhowaan: waa lacag la'aan, laakiin xamuul ayaa la ururin doonaa muunad la habeeyay: waxay u baahan tahay lacag tijaabo ah, laakiin waan soo celin doonnaa haddii aan amarro rasmi ah mar dambe yeelno.
2. S: Sidee ku saabsan waqtiga tijaabada?
J: Tijaabooyinka jira, waxay qaadataa 1-2 maalmood. Tijaabooyinka shay-baarka loo habeeyay, waxay qaadataa 7-10days.
3. S: Muddo intee le'eg ayay tahay soo-saaristu waqtiga hoggaamintu?
J: Waxay ku qaadataa 15-30 maalmood MOQ.
4. S: Waa imisa qiimaha xamuulka?
J: Waxay ku saleysan tahay amarka qty iyo waliba habka loo raro! Qaabka rarka adigaa iska leh, oo waxaan kaa caawin karnaa inaanu muujino qiimaha ka imanaya dhinacayaga si aad ugu tixraacdo Waxaadna dooran kartaa habka ugu jaban ee rarka!
Hore: bustaha dabka
Xiga: PTFE dahaarka Maro adag